तपाईंको मोबाइल निगरानी गर्न सरकारले दियो मलेसियन कम्पनीलाई ७७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल सेटलाई नियमन गर्न पहिलोपटक डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)का लागि सम्झौता भएको छ । यो सिस्टम प्रयोगमा आएपछि चोरी भएको मोबाइल फेला पार्नदेखि अवैधरुपमा आयात गरिएका सेटहरु..
तपाईको आवाज सुनेर टाइप गर्ने गुगल डक्स, कसरी प्रयोग गर्ने ?
गुगलको नयाँ एप्लिकेसन गुगल डक्सको प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्यामा लगातार बढोत्तरी भइरहेको छ । माइक्रोसफ्ट वर्डजस्तै गुगल डक्समा पनि प्रयोगकर्ताले बेसिक वर्ड प्रोसेसिङ फिचर तथा शर्टकटहरु प्राप्त गर्दछन् । गुगल डक्सको..
साझा यातायातले पायो साढे ३२ करोड रुपैयाँ विद्युतीय बस किन्न
काठमाडौं। साझ सहकारीले सञ्चालन गरिरहेको साझा यातायातमा ३ नम्बर प्रदेश सरकारले शेयर पूँजी हालेको छ। प्रदेश सरकारले ३० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको हो। ३० करोडको चेक ३ नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला..
काठमाडौं । ओपोले नेपालमा रेनो १० एक्स जुम इडिसनमा सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ फ्ल्यागसिप रेनो सिरिज अन्तर्गतको यो फोन आइतबारदेखि नेपाली बजारमा उपलव्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ। ओपो रेनो १० एक्स..
नेपाल टेलिकमको नयाँ सेवा सुरु, फोन गरेर स्वास्थ, मौसमलगायत जानकारी पाइने, ६ महिनासम्म निशुल्क
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले विश्वव्यापी विकास संस्था भियामोसँग साझेदारी गरी ‘एनटी सूचनाको संसार’ सेवा आजबाट उपलब्ध गराएको छ। यो एक प्रकारको कल–इन सिष्टम हो, जसमा नेपाल टेलिकमको मोबाइलमार्फत कल गरेर कृषि, स्वास्थ्य,..
८७ हजारबढी हुवावेले के के आविष्कार गर्यो होला ? ८७ हजार बढी पेटेन्ट राइट्स
काठमाडौं । विश्वप्रख्यात चिनियाँ कम्पनी हुवावेको विश्वभर ८७ हजार ८०५ आविस्कारमाथि (पेटेन्ट राइट्स) रहेको उक्त कम्पनीले बिहीबार दावी गरेको छ । यसमध्ये कुल ११ हजार १५२ अमेरिकी आविस्कारमा पनि हुवावेको पेटेन्ट..
१६ गतेदेखि यी नयाँ रुटमा चल्नेछन् साझा, बस संख्या ७१ पुग्यो
काठमाडौं । असार १६ गते देखि साझाका २० सिटी बस सञ्चालनमा आउने भएका छन्। साझाले यी बसहरुको रुटसमेत पाइसकेको कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मेहेन्द्र राज पाण्डेले जानकारी दिए। साझाका नयाँ २०..
अब काठमाडौंमा सवारी पार्किङ गर्दा बाइकको प्रतिघण्टा २५ र गाडीको ८० रुपैयाँ तिर्नु पर्ने
काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रको सशुल्क सवारी पार्किङको शुल्क तोकेको छ। महानगरले दुई पांग्रे सवारी साधनको प्रति घण्टा २५ रुपैयाँ र चार पाँग्रे सवारी साधनको घणटाकै ८० रुपैयाँ तोकेको छ। महानगरका अनुसार न्यूरोड,..
हुवावेले भन्यो : यि मोडेलका फोनमा फेसबुक र गुगल नचले पूरै पैसा फिर्ता
काठमाडौं । नेपालका लागि हुवावे स्मार्टफोनको वितरक कल मोविलिटीले हुवावेका स्मार्टफोन र ट्याब्लेटहरूमा गुगल एपहरू तथा फेसबुक चल्ने प्रष्ट पारेको। उसले ढुक्क भए फोन किन्न र चलाउन उपभोक्तालाई आग्रह गरेको..
फेसबुकले ल्याउन लागेको डिजिटल पैसा, खतरनाक मुद्रा भएको :अमेरिकी सांसद
एजेन्सी । फेसबुकले आगामी वर्षमा डिजिटल मुद्रा लिब्रा उपयोगमा ल्याउने भनेको केही दिनमै विरोध पनि भएको छ । खासगरी अमेरिकी संसद अन्तर्गत फाइनान्सियल सर्भिसेस कमिटीले यस्तो मुद्राको विकास अहिले नगर्न सुझाव..
टेलिकमले ल्यायो २० रुपैयाँमा ७० मिनेट कुराकानी गर्ने अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले २० रुपैयाँमा ७० मिनेट कुराकानी गर्ने अफर ल्याएको छ। आफन्त र साथीभाइहरुको साथमा रमाउनका लागि भन्दै टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि नयाँ अफर ल्याएको हो। यस अघि टेलिकमले..
चिनियाँ भाषा निजी विद्यालयले पढाए शिक्षकको तलब चीनले दिने
काठमाडौं । नेपालको भीमकाय छिमेकी मुलुक चीनसँग लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालको घनिष्ठ सम्बन्ध रहदै आएको छ । नेपालको विभिन्न विकासदेखि अन्य क्षेत्रमा चीनले सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा हुने..
तपाईको मोबाइलमा खतरनाक एप त छैन? यस्ता छन् खतरनाक २२ एप जुन फोनमा कहिल्यै राख्नु हुँदैन
काठमाडौं । ‘एन्ड्रोइड’ मोबाइलमा बिभिन्न किसिमका एपहरु हुन्छन्। जुन हामी ‘प्ले स्टोर’बाट डाउनलोड गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले ‘प्ले स्टोर’बाट एप ‘डाउनलोड’गर्दा कहिलेकाँही यस्ता एप पनि ‘डाउनलोड’ हुन्छन्, जसले हाम्रो मोबाइललाई नराम्रो..
फेसबुक, ट्वीटरमा कसैलाई जिस्काए पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको विकास समितिले फेसबुक ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई कस्ने प्रावधान यथावत् राखेर सूचना प्रविधि विधेयक अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। समितिले सांसद बिना श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले..
अब एनसेल फोरजीमा प्रयोग गरे बराबरको डेटा सिस्तैमा पाईने
काठमाडौं । एनसेल प्राईभेट लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकका लागि डेटामा आकर्षक योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत ग्राहकले डबल फोरजी डेटाको मजा लिन सक्नेछन् । यो योजना अन्तर्गत एनसेलका ग्राहकले सात दिन र..
६ महिनाभित्रै नेपालमा बिजुली कार बन्ने, मूल्य १५ लाख
काठमाडौं । हुलास मोर्टसले नेपालमा ६ महिनाभित्रै विद्युतीय कार उत्पादन गर्ने भएको छ। बिराटनरस्थित मिल्स एरियामा रहेको प्लान्टमा कार निमार्णको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हुलास मोटर्सका जनरल म्यानेजर प्रफुल्ल चन्द्र दासले..
नेपाल टेलिकमको चाइना कल अफर
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले अब छिमेकि राष्ट्र चीनमा केबल ३ रुपैंयाँ ३ पैसामा प्रतिमिनेट कुरा गर्न पाउने भएका छन । चीनमा नेपालीको व्यापार, व्यवसाय र कारोबारमा भएको बढोत्तरीलाई थप सहजता..
यि हुन् भाग्यमानी जसले हुन्डाई फेष्टिभ डिलाइटमा कार जिते
काठमाडौं । हुन्डाई अटोमोबाइल्सको नेपालको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले एक समारोहकाबीच 'हुण्डाई फेष्टिभ डिलाइट'२०७५ का बम्पर विजेताहरुलाइ पुरस्कृत गरेको छ । हुण्डाईको नक्साल शोरुममा भएको समारोहमा लक्ष्मी समूहका अध्यक्ष गणेश बहादुर..
के बाइक किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ ? ध्यान दिनुस् यी कुरामा
काठमाडौं । बाइक किन्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने बाइक पुरानो वा नयाँ जस्तोसु्कै होस् दुबैका आफ्नै फाइदा र बेफाइदा हुनसक्छन्। पुरानो बाइक किन्दा सस्तो हुनसक्छ तर यसलाई मेन्टेनेन्स गर्नु र खर्च दुवै..
हुवावेको नयाँ फोनमा फेसबुक, ह्वाट्सएप र इस्टाग्राम एप नहुने
एजेन्सी काठमाडौं । हुवावेका नयाँ स्मार्टफोनमा फेसबुक, ह्वाट्सएप, इस्टाग्राम एप प्रतिबन्धित हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोएटर्सका अनुसार फेसबुकले आफ्ना एप अब बन्ने हुवावेका नयाँ फोनमा ुप्रि(इन्स्टलु व्यवस्था हटाउने भएको हो। कम्पनीका..
काठमाडौं । चाबहिल चुच्चेपाटी स्थित केएल मोबाइल हबमा जेठ २७ गते सोेमबारदेखि २ सातासम्म मनसुन मोबाइल मेगाअफर चल्ने भएको छ। मोबाईल मेला अवधिमा एउटा मोबाइल किन्दा अर्को मोबाइल सित्तैंमा पाइने आयोजकको..
१२४ स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना हुने (कुन कनु परे हेर्नुस् सूची)
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका १२४ स्थानीय तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले केन्द्र स्थापना सम्बन्धि बनाएको कार्यविधिअनुसार प्रकाशित सूचनामा परेका आवेदनबाट १२४ तह छनौट गरेको हो। सूचना..
नेपाल टेलिकमको न्यूनतम शुल्कमै असिमित कुराकानी गर्न मिल्ने 'कर्पोरेट युजर ग्रुप स्कीम' कसरी लिने ?
काठमाडौं।नेपाल टेलिकमले न्यूनतम प्याकेज रकमबाट महिनाभरी मोवाइलमा असीमित कुराकानी गर्न सकिने सुविधा ल्याएको छ। कम्पनीले संस्थागत प्रयोगकर्ता समूह कर्पोरेट युजर ग्रुप योजना अनुसार यो सेवा प्रयोग गर्न पाउने जनाएको छ।कम्पनीका अनुसार..
बजेटले घटाइदियो यी मोटरसाइकलको मूल्य
काठमाडौं । बजेटका कारण केही मोटरसाइकलको मूल्य घट्ने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६\_७७ का लागि ल्याएको बजेटले १५५ सिसी क्षमतासम्मको मोटरसाइकललाई एउटै समूहमा राखेर अन्तःशुल्क कायम गरेपछि केही..
नेपाल टेलिकमले सरकारलाई २० अर्ब शुल्क तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमसँग मोबाइल लाइसेन्सको दोस्रो नवीकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ पाउने निश्चित भएको छ । मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएपछि पहिलोपटक १० वर्षमा र त्यसपछि हरेक ५,..
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा टेलिकमले ल्यायो सर्वाधिक सस्तो योजना, ५० रुपैयाँमा डाटा, भ्वाईस र एसएमएस
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आकर्षक अफर ल्याएको छ । यो अफर टेलिकमका ग्राहकले ५० रुपैयाँमा ७ दिनसम्म प्रयोग गर्न सक्नेछन् । टेलिकमका अनुसार ५० रुपैयाँमा ४ सय एमबी..
काठमाडौंं । एनसेलका ग्राहकले अब भारत भ्रमणमा रहँदा बिना कुनै झन्झट अझ सुलभ दरमा डेटा रोमिङ्ग सेवाको मजा लिन सक्ने भएका छन् । ग्राहकले आफु भारत भ्रमणमा जादाँ आफ्नो एनसेल..
अब हुवावे फोनमा जिमेल, गुगल म्याप, युट्युब चलाउन नमिल्ने
काठमाडौं । अमेरिकी सर्च इन्जिन कम्पनी गुगलले चिनियाँ टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी हुवावेसँग गर्दै आएको प्राविधिक कारोबार रोक्ने भएको छ। गुगलको यो निर्णयसँगै विश्वको तेस्रो ठूलो स्मार्ट फोन निर्माता हुवावेले अब बनाउने..
एनसेलले ल्यायो ‘ट्राभलर्स सिम’, के छ यस्मा फाइदा ?
काठमाडौं– विश्वका विभिन्न कुनाबाट नेपाल भ्रमणमा आउने पर्यटकले अब एनसेलको ‘ट्राभलर्स सिम’ मार्फत आकर्षक भ्वाइस तथा डाटा बन्डलिङ सेवा पाउने भएका छन् । एनसेलले यहि मंगलबार (बैशाख ३१) देखि लागु हुने..
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले विकट हिमाली जिल्ला बझाङमा निःशुल्क सिमकार्ड वितरण गरेको छ । टेलिकमले जिल्लाको बुंगल नगरपालिकाको देउलीकोट, दहबगर र जयपृथ्वी नगरपालिकाको ग्वानीमा टावर निर्माण गरेसँगै स्थानीय बासिन्दालाई सिमकार्ड..
Results 402: You are at page3of 14